Morton Isiyingi Ukwaluka Machine futhi Izingxenye elingasebenzi
Intambo Yesithathu Yoboya Obuyindilinga Yokweluka
Double Jersey Open Ububanzi Isiyingi Ukwaluka Machine
Ijubane Elikhulu Single Jersey Knitting Machine
Seamless Ukwaluka Machine
Double Jersey Computerized Jacquard Isiyingi Kn ...
Interlock Vula Ububanzi Isiyingi Ukwaluka Machine
Isevisi yokuthengisa ngaphambili
Ukubonisana ngebhizinisi okuhlanganisiwe kanye nensizakalo yokuklama yamahhala. Ukwenziwa kwendwangu yobungcweti nokwenza ukukhethwa kosayizi womshini, ingxenye ephelele yomshini womshini nokuklanywa kwesistimu.
Ngaphansi kwenkonzo yenkontileka
Ukuqaliswa kokulawulwa kwekhwalithi eqinile, ukulethwa ngesikhathi, ukuhleleka kokuphepha kanye nokusekelwa okuhle kwezezimali.
Sizothatha intshiseko eyi-100% ukuxazulula nokwakha isigidi sephutha elingaba khona ngesikhathi esifanele.
UMorton unethemba lokwenza ibhizinisi nawe ndawonye! Umlingani omuhle wokuhlinzeka ngomsebenzi webhizinisi elihle njengawe!
IMorton Machinery Company ubuchwepheshe obusezingeni eliphakeme bokuklanywa komshini wokwenza umshini, insizakalo kanye nokuhlinzeka ngengubo nezindwangu zezimboni.Yonke imikhiqizo yethu iyazisa kakhulu ezimakethe ezahlukahlukene emhlabeni jikelele. Besilokhu sihlinzeka ngomshini owodwa weJersey, i-Fleece Machine, i-Jacquard Machine, i-Rib Machine & Umshini Wobubanzi Ovulekile neminye imikhiqizo ehlobene nayo ngokusekelwa kwezobuchwepheshe nokusekelwa esizeni e-India, eTurkey naseVietnam iminyaka eminingi. ukwenziwa okumise ukwakheka kocingo olunentambo nge-aluminium cam ibhokisi okungcono kakhulu ukuzinza komshini nokunemba okuphezulu.
ilanga elibizayo lokulala ekamelweni lokulala
Indwangu emnandi kaMinky iphonsa iphethini yengubo
Izingubo zokuzivocavoca ezingenamikhono zabesifazane imikhono emide ye-yoga isethi yesudi yezemidlalo ephezulu
Indwangu yokweluka ukotini eyelukiwe yendwangu yekhafu
Mens 100 Ukotini Under Vest
Konke esikwenzayo, ukunciphisa izindleko zakho zokuthenga nezokulungisa, namandla okuncintisana emakethe kwasendaweni. Insizakalo ephelele kaMorton, izokusindisa umthwalo omningi womsebenzi futhi ikulethele isipiliyoni esijabulisayo.
Ama-oda aba "amazambane ashisayo" we-t ...
Muva nje, ngenxa yokwanda kwamacala aqinisekisiwe e-Covid-19 e-Southeast Asia efana neVietnam, imboni yezokukhiqiza ingabuyela eChina ngokwengxenye. Ezinye izinto zikhonjiswa kwezohwebo, neqiniso ...
Ungaxhumana kanjani ngempumelelo ngaphakathi kwe-enter ...
Ukuxhumana akusewona nje umsebenzi “othambile”. Ukuxhumana kungathuthukisa ukusebenza kwenkampani futhi kuqhube impumelelo yebhizinisi. Singakusungula kanjani ukuxhumana okusebenzayo futhi siguqule umuntu ...
China-US container wezimpahla usukhuphuke waya ku-20,000 ...
Ukuthunyelwa kwamasheya kuthuthukise lo mkhuba kwaqina, ne-Orient Overseas International inyuka ngo-3.66%, kwathi iPacific Shipping yenyuka ngaphezu kuka-3%. Ngokusho kweReuters, ngenxa yokwanda okuqhubekayo kwe-r ...
Enqubeni yokuluka yomshini wokuluka oyindilinga, lapho umshini uqala futhi ume, kwesinye isikhathi kuzokhiqizwa indilinga yamamaki avundlile engxenyeni yendwangu, evame ukubizwa ...